Iziko lezeMfundo ze-Forex | FXCC
EZIMISEBENZI ZEZINTLOKO ZEMFUNDO
Njengoko uqala uhambo lwakho lokurhweba, kubalulekile ukuba uqhelane
kunye neenzuzo ze-ECN yorhwebo, kwaye silapha ukukunceda.
Yintoni oyifunayo ukuba uyayazi xa uthengisa i-Forex
Hlola ezi zinto ezisemgangathweni ze-forex kwaye uzixhobisa ngokwakho ukubeka amashishini anolwazi
Funda ukuba kutheni i-ECN ikamva leMakethe eMashishini angaphandle.
Uthini umahluko phakathi kweendlela ezimbini kunye neenzuzo ze-ECN ezizisa abahwebi?
Ziqhelanise nemibandela yesibili yemali kunye neempawu zabo.
Ukuqonda i-rollover kubalulekile ukwenza ukubala kwakho kulungile.
Funda nini ukuhluma kwenzeka kwaye kwindlela ekuchaphazela ngayo ishishini.
Kutheni kubalulekile ukuqonda ngokugcwele umgaqo we-marginal xa uthengisa i-Forex?
Funda indlela yokuqhuba ngempumelelo ishishini kunye neFXCC kwaye uqonde iimveliso zethu.
Ukuphucula ukuthengisa kwakho kunye nokukhethwa kweencwadi ze-forex, ukubonelela ngeengcebiso kunye nokuqonda iingcamango ezibalulekileyo zokuthengisa
BONISA BONKE IBOOKS
Vula i-Akhawunti ye-ECN yamaHlabathi namhlanje! Qala ukurhweba kunye nomthengisi ohlangothini lwakho!
Yintoni eqhuba ukuthengisa? Fumana ulwazi malunga neemeko zoqoqosho jikelele ezichaphazela ukunyuka kweemarike.
Inani elikhulu lokusetyenziswa liye lafakwa kwiziko lezemfundo ngaphambili
ukuqinisekisa ukuba kunokwimeko eyahlukileyo kunye nokwandisa abaxhasi bethu ulwazi.
-Iziseko ze-Forex -Uhlaziyo lwe-Forex -Icebo le-Forex
Izifundo zokuThengiswa kweeNkcazo
- Abaqalayo -Phakathi
Fumana iimpendulo kwimibandela efunwa rhoqo ngokuphathelele imodeli yethu yezorhwebo okanye ukuthengisa ngokubanzi.